सामग्री सिन्डिकेशन बुझ्ने र यसलाई कसरी तपाईंको लागि काम गर्ने - Semalt सिंहावलोकन
सामग्री सिन्डिकेशन बुझ्दै र यसले कसरी तपाईंको लागि काम गर्ने - Semalt सिंहावलोकन
सामग्री सिंडिकेशनले तपाईंको सामग्री र एसईओ रणनीतिको भविष्यलाई अर्थ गर्न सक्दछ। यो लाग्छ के बुझ्नु महँगो हुनेछ। यस लेखमा, Semalt तपाइँ तपाइँको व्यवसाय को लागी सामग्री सिंडिकेशन सही छ वा छैन भनेर निर्णय गरे अनुसार मार्गदर्शन गर्दछ। जब तपाइँ सक्नु हुन्छ, तपाइँ सामग्री सिन्डिकेशनको आधारभूत बुझ्नुहुनेछ। अन्तमा, हामी तपाईंलाई कसरी देखाउन सक्छौं हामी तपाईंलाई देखाउने छौं।
संक्षेप मा, सामग्री सिन्डिकेशन आधुनिक दिन मार्केटिंगको केन्द्रीय स्तम्भ मान्न सकिन्छ। यो वर्षौं देखि अस्तित्वमा छ र यो आज के गर्न एक धेरै उस्तै भूमिका खेल्छ। धेरै बर्ष, यसको प्रकृति प्रासंगिक रहन केहि परिवर्तनहरू पार गर्नुपर्‍यो। तत्वहरूको रूपमा उत्कृष्ट सामग्री परिवर्तन भयो, सामग्री सिन्डिकेशन पनि विकसित गर्नुपर्‍यो।
अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा स्पष्ट पार्नुहोस्; यो सत्य होइन कि ब्लगहरू र लेखहरू केवल सामग्री प्रकारहरू हुन् जुन सिन्डिकेट गर्न सकिन्छ। त्यहाँ वास्तवमा त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् जुन तपाईंलाई बृहत रूपमा सिर्जना गर्न र प्रकाशन गर्न मद्दत गर्न सक्दछन्, ब्लग र लेखका साथै सामग्री ढाँचाको एक विस्तृत विविधता।
आज हाम्रो विश्वमा, सामग्रीको दायरा र गुणवत्ता विस्तार हुँदैछ साथ साथै स्काईरोकेटि। पनि। स्पष्टसँग भन्नुपर्दा, सामग्री सिन्डिकेशन प्रयास गर्न अझ रोमाञ्चक समय भएको छैन।
हामीले प्रदान गर्ने ज्ञानको साथ, तपाईं तपाईंको खाता सिन्डिकेशन रणनीतिको अंशको रूपमा खातामा आधारित मार्केटिंग, आशय-चालित मार्केटिंग, र अधिक प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
सामग्री सिन्डिकेशन के हो?
सामग्री सिन्डिकेशन धेरै व्यापक दर्शकहरूमा पुग्ने माध्यमको रूपमा तेस्रो-पक्ष प्लेटफर्ममा स्वामित्व अनलाइन सामग्री प्रकाशन प्रक्रियाको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। सामग्री सिन्डिकेशन कार्य बृद्धि मार्केटिंग रणनीतिको रूपमा कार्य गर्दछ जुन धेरै आउटरीच लक्ष्यहरू पूरा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सामग्री सिंडिकेशनको साथ, तपाईं मौलिक रूपमा तपाईंको सामग्री देखाइएको दर्शकको मात्रा बढाउन सक्नुहुन्छ। सामग्री सिन्डिकेशनको साथ, दक्षताको कुञ्जीले सही प्लेटफर्म छनौट गर्दैछ जुन तपाईंलाई दर्शकहरूसँग जोड्दछ जुन खरीद निर्णय लिनको लागि तयार छ।
यो त्यो अवस्था हो कि सामग्री सिन्डिकेशनको वास्तविक सम्भावना देखियो। यो प्रदर्शन मार्केटिंग हुन्छ।
सामग्री सिंडिकेट गर्दा, सामग्री सिन्डिकेट गर्ने बेलामा त्यहाँ विभिन्न दृष्टिकोण प्लेटफर्महरू छन्। यी प्लेटफर्महरू:
कार्य पूर्ण रूपमा पुन: प्रकाशित गर्नुहोस्।
यसलाई सम्पादन गर्नुहोस् र यसलाई छोटो बनाउनुहोस्।
मूल टुक्रा बाट संक्षिप्त अंश पोस्ट गर्नुहोस्।
यी प्रत्येक विधिहरूमा, क्रेडिट अझै पनि मूल प्रकाशन स्थानमा तोकिएको छ। सिंडिकेशन दुबै पक्षलाई राम्रोसँग लेखिएको सामग्रीको लूटहरू साझा गर्ने एक तरीका हो। यस पक्षको सिंडीकेटले नयाँ सामग्री पाउँदछ, र व्यापार जसले यो सामग्री सिर्जना गर्‍यो त्यसले सम्भावित ग्राहकहरूको नयाँ सेटमा जडान हुने अवसर प्राप्त गर्दछ।
को सामग्री सिंडिकेशन को लाभ?
प्राय: सबै व्यवसायसँग सामग्री सिन्डिकेसनको परिणामबाट फाइदा लिन एक वा बढी चीजहरू छन्। जब सही र उचित दर्शकहरूलाई गरिन्छ, यो विज्ञापन गर्ने उत्तम तरिका हो। जहाँसम्म, त्यहाँ केहि व्यवसायहरू छन् जुन पहिल्यै शानदार र रचनात्मक सोच नेतृत्व सामग्री सिर्जना गर्दैछ जुन तत्काल फाइदाहरू हेर्नको लागि उत्तम स्थानमा छ।
B2B टेक्नोलोजिकल उद्योगमा धेरै त्यस्तो स्थितिमा छन् जहाँ उनीहरूसँग उत्कृष्ट सामग्री छ तर त्यस्तो सामग्रीलाई मूल्यवान गर्न उचित श्रोताको अभाव छ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, सामग्री सिन्डिकेशनले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।
वेबसाइटहरूले सामग्री सिन्डिकेशनको प्रयोग किन गर्छन्?
धेरै साना र मध्यम स्तरका व्यवसायहरूले आश्चर्यजनक सामग्री सिर्जना गर्ने प्रयासमा धेरै समय र संसाधनहरू खर्च गर्छन्। तर समस्या यो हो कि यी सामग्रीहरू देखाउन तिनीहरूसँग ठूलो श्रोताहरूको अभाव छ। त्यस्ता परिदृश्यहरूमा उनीहरूले आफ्नो श्रोताको पहुँच सुधार गर्न बढी समय र प्रयास केन्द्रित गर्नु आवश्यक पर्दछ।
एक दर्शक बिना, सामग्री मार्केटिंग केवल समय र संसाधनहरूको बर्बादी हो। तर तपाईं ज्वार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
सामग्री सिन्डिकेशनको साथ, तपाइँ तेस्रो पक्षमा निर्भर रहन सक्नुहुन्छ तपाइँ तपाइँको सामग्रीबाट उनीहरूको श्रोताको अगाडि राखेर अधिक फाइदा लिनको लागि। यसको मतलव तपाईको सामग्री एक ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्न सक्दछ जुन तपाईका सामग्रीहरू पढ्न मन पराउने मानिसहरूका प्रकार हुन्। अन्तमा, तपाईं अधिक ट्राफिक र रूपान्तरणहरू पाउनुहुनेछ।
त्यहाँ केहि सामग्री सिंडिकेशन प्लेटफार्महरू छन् जसले व्यवसायलाई विशेष कोर श्रोताहरू बीच चेतना जगाउन मद्दत गर्दछ, तर तिनीहरू आफैलाई सोच्ने नेताहरूको रूपमा पनि स्थापित गर्छन्।
यो रणनीति प्रयोग गरेर, व्यवसाय लेडहरूको एक बृद्धि गरिएको रमाईलोको रूपमा परिचित छ। व्यवसायहरू पनि आशय र खातामा आधारित मार्केटिंग दृष्टिकोणहरूको प्रयोगको माध्यमबाट उनीहरूको तल्लो रेखा बढ्न सक्छन्।
तपाइँको सम्भावित खरीददारहरूसँग जडान खोजिरहनु भएको बेलामा तपाइँको वेबसाइटमा सामग्री सिन्डिकेटिंग मात्र पहिलो चरण हो। त्यहाँ धेरै अन्य दोस्रो फाइदाहरू छन्।
सामग्री सिन्डिकेशनले वेब गुणहरूमा जैविक र रेफरल ट्राफिक बढाउन मद्दत गर्दछ। यो एक आधिकारिक वेबसाइटको लिंकहरूको रूपमा देखा पर्दछ तपाईंको सामग्रीमा फेला परेको उच्च स्तरको संकेत गर्दछ।
यदि सामग्री मिडिया प्रकाशनमा प्रकाशित भयो भने, लिंकहरू जुन प्राथमिक वेबसाइटले फिर्ता हुन्छ उसले डोमेनको अधिकार बढाउन मद्दत गर्दछ, जसले प्राथमिक वेबसाइटलाई जैविक खोजी सर्तहरूको लागि उच्च स्तरमा मद्दत गर्दछ। यसका अतिरिक्त, ब्रान्ड मान्यता र अनलाइन उपस्थिति बढ्नेछ। प्रदान गरीएको छ कि वेबसाईटले निरन्तर र गुणस्तरीय सामग्री प्रकाशन गर्न जारी राख्छ, यसले आकर्षित गर्न र रूपान्तरण गर्न जारी राख्छ।
सामान्यतया, छलफल गर्न र भविष्यमा तपाईंको सामग्री वितरण र क्रस-प्रमोट गर्ने अवसरहरू पत्ता लगाउन अन्य उद्योग विशेषज्ञहरू समक्ष पुग्न यो सजिलो हुनेछ। जब तपाईं भीड बजारमा ध्यान दिनको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको सामग्री धेरै र प्लेटफर्महरूमा ठूलो र उपयुक्त दर्शक प्रकारको साथ प्रकाशन गर्नाले तपाईंको उद्योगमा तपाईंको भूमिकालाई ठोस बनाउँछ। यसले तपाईंको अधिकार स्थापना गर्दछ र तपाईंको ब्रान्डलाई अलग बनाउँदछ।
अर्को स्तरमा, सामग्री सिन्डिकेशनले एक संस्था भित्र कसरी महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू हुन्छन् देखाउँदछ। जब सामग्री सिन्डिकेशन प्रदर्शनको साथ नजिकबाट मिलाइन्छ, यो निम्न लाभहरूको साथ शक्तिशाली हुन्छ:
यो प्रमाणित गर्दछ कि सामग्री ड्राइव मूल्य
सामग्री सिन्डिकेशनले सामग्रीको मूल्य र लिड्स उत्पादनको लागि उपकरणको रूपमा सामग्रीको वास्तविक मूल्यको रूपमा लिइएको कुराको बीचमा प्रत्यक्ष रेखा खिच्न सक्छ। यो सोच्ने नेतृत्वमा व्यवसाय मूल्य प्रदर्शन गर्न वास्तवमै सब भन्दा छिटो र सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका हो।
यसले राजस्व लक्ष्यहरू प्राप्त गर्दछ
सामग्री मार्केटरहरू तिनीहरूको व्यवसायको लागि राजस्व उत्पन्न गर्ने क्षमताको आधारमा न्याय गरिन्छ। सामग्री सिंडिकेशनको साथ, तिनीहरू सोचे नेतृत्वको माध्यमबाट मूर्ति राजस्व ड्राइभ गर्न सक्दछन्। यसले व्यक्तिगत अभियान वा सामग्रीको टुक्राहरूको लागि राजस्वलाई श्रेय दिन धेरै सजिलो बनाउँदछ।
सामग्री एक ठूलो दर्शकहरु को लागी आउँछ
एक वेबसाइट को रूपमा, प्राथमिक ड्राइव सामग्री प्रकाशित गर्न र यो सामग्री तपाइँको लक्षित दर्शकहरुमा पुग्न सुनिश्चित गर्नु हो। सामग्रीले जति धेरै हेराईहरू पाउँछन् त्यति नै उत्तम हुन्छ। सामग्री सिंडिकेशन सुनिश्चित गर्दछ कि प्रकाशित सामग्री को लागी देखिन्छ जो यो बाट मूल्य प्राप्त गर्नेछ। तपाईंको पहुँचको दायरा फराकिलो गरेर, सिंडिकेशनले ब्रान्डको मान्यता र सबै प्रयासहरूको लागि स्टिकिनेस सुधार गर्न सक्दछ।
कसरी सामग्री सिंडिकेशन काम गर्दछ?
आज, हामीसँग different० भन्दा बढी बिभिन्न कम्पनीहरू छन् जसले सामग्री सिन्डिकेशन सेवाहरू प्रदान गर्दछ। यी धेरै जसो कम्पनीहरूका लागि प्रक्रिया मूल रुपमा उही हो।
रेन्डर गरिएका सेवाहरूको लागि इष्टतम मूल्य प्राप्त गर्न, यी कम्पनीहरूले भुक्तानी प्रणाली चलाउँछन् जुन लागत प्रति लीड (सीपीएल) भनिन्छ।
तिनीहरू प्रत्येक अभियानको लागि लक्ष्य अनुकूलित गर्दछन् तिनीहरू उद्देश्यका साथ चल्दछन् सामग्री मात्र सबैभन्दा उपयुक्त श्रोताको प्रकारमा प्रस्तुत गर्न। यी कम्पनीहरूको प्रयोग गर्ने वेबसाइटहरूले बुझ्दछन् कि अधिक निर्दिष्ट लक्ष्यीकरण, सीपीएल जति बढी हुन्छ, अधिक पाठकहरू लिड बन्न बाध्य हुन्छन्।
धेरै वेबसाइटहरूले यी सिंडिकेशन कम्पनीहरूको क्षमताहरूको परीक्षण गर्छन् सानो बजेटबाट शुरू गरेर र त्यसपछि प्रक्रियालाई राम्रो बजेटमा दोहोर्याउँदै यदि उनीहरू परिणामबाट प्रभावित भए भने। एक राम्रो कम्पनीको साथ साझेदारी गरेर, उनीहरूले उनीहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र तपाईंको उपजलाई अधिकतम बनाउनको लागि उनीहरूको अनुभव प्रयोग गरेर उनीहरूको भूमिका पर्याप्त प्रदर्शन गर्छन्।
अहिले भन्दा पहिले धेरै सिन्डिकेट्सले सेवा समर्थन प्रदान गरेनन्, तर जब उद्योगको विकास भइरहेको छ, तिनीहरू पनि आफ्नो सेवामा अझ राम्रो हुँदै गइरहेका छन्।
सामग्री सिन्डिकेशन द्वारा सक्षम विकास प्रकाशनको पारमा विकसित हुनुपर्दछ। यो पनि सम्भावित दर्शकहरु लाई फनेल भित्र ल्याउन सक्षम हुनुपर्दछ प्रोस्टिसिटी लक्ष्यीकरण विधिसँग समावेश गरेर जुन सम्भावनालाई केन्द्रित गर्दछ, जुन कि त किन्न तयार छ, वा सम्भावनाहरू जुन लक्षित व्यवसाय भित्र राम्रो छन्।
सामग्री सिंडिकेशन का प्रकार
त्यहाँ सामग्री सिन्डिकेशनका अन्य प्रकारहरू छन्, जस्तै:
कमाईएको सिन्डिकेशन: त्यहाँ केहि ब्लगहरू र समाचार आउटलेटहरू छन् जसले आफ्ना सम्पादकीयहरूको मेरुदण्डको रूपमा सिन्डिकेटेड सामग्रीहरू प्रयोग गर्दछ। वेबसाइटहरू त्यस्ता प्रकाशनहरूमा सजिलैसँग भेट्न सक्दछन् यदि तिनीहरू इच्छुक छन् भने।
सामाजिक सिंडिकेशन: यहाँ, दुई कम्पनीहरू एक अर्काको सामग्रीलाई उनीहरूको सामाजिक मिडिया च्यानलहरूमा प्रमोट गर्न सहमत छन्।
सह मार्केटिंग: यहाँ, दुई वा अधिक कम्पनीहरूले उनीहरूको प्रचार-प्रसारमा जोड दिन्छन्। सबै पार्टीहरू सामग्रीको एक टुक्रा पदोन्नति गर्न सहमत छन् र त्यसपछि प्रदान गरिएको नेतृत्व साझेदारी गर्दछ।
तपाइँ कहाँ आफ्नो सामग्री सिंडिकेट गर्नुपर्छ?
हरेक अन्य मार्केटिंग रणनीति जस्तै, तपाईंको दृष्टिकोण तपाईंको सामग्री सिन्डिकेशन को सफलता निर्धारित गर्दछ। तपाईले आफ्नो प्राथमिकतामा निर्भरता तल दिइएका एक वा धेरै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ।
सिंडिकेशन आउटलेटका प्रकारहरू:
सामग्री सिन्डिकेशन तपाईको लागि सामग्री बनाउने सब भन्दा छिटो तरीका हो। यसको प्रारम्भिक चरणहरूमा पनि, यसले सही गरेपछि प्रोत्साहनजनक परिणामहरू प्रदान गर्दछ। यसले लामो समयदेखि चलिरहेको इक्विटी पनि सिर्जना गर्दछ किनकि यसले निरन्तर तपाईंको ब्रान्डलाई माथि उठाउँदछ। सामग्री सिंडिकेशनको साथ, तपाइँ यसलाई दर्शक जसले यसको मूल्यलाई कदर गर्दछ र तपाइँको मुनाफाको लागि उत्पन्न गरेर तपाइँको सामग्री लगानी इनाम दिनुहुन्छ।